Trivia Crack21.25.0 Android အတြက္ Aptoide APK အား ေဒါင္းလုပ္ ျပဳလုပ္ပါ
ဗားရွင္း 1.25.0 လြန္ခဲ့ေသာ3ရက္က
ဂိမ္းမ်ား ဥာဏ္စမ္း Trivia Crack 2
Trivia Crack2၏ ေဖာ္ျပခ်က္
တစ်ဦး trivia ယှဉ်ပြိုင်ရန်သင့်မိတ်ဆွေများနှင့်မိသားစုကိုစိန်ခေါ်မယ်, သင်ဘယ်လောက်စမတ်ကျသပွေ ** သင့် Smart ချွတ်ပြ!
trivia အသုံးဝင်သောမဟုတ်ကပြောပါတယ်သူကားအဘယ်သူ ** သင့်ဦးနှောက်လေ့ကျင့်ပေးပါ? သင်သည်သင်၏မတူညီအမျိုးအစားပုံမှန်ထက်ပူဇျောသက်ကာ, ချစ်စရာဇာတ်ကောင်များနှင့်အပြန်အလှန်ပြောဆိုပစ္စည်းများနှင့်အတူအသေးအဖွဲ Crack 2. အသေးအဖွဲ Crack2သခင်ကစားသစ်တွေ Modes သာ features တွေနဲ့ချွန်ထက်သင့်ဦးနှောက်စောင့်ရှောက်မည်။
** အက္ခရာစုစည်းရရှိတက်အဆင့်နှင့်အံ့သြဖွယ်ဆုအနိုင်ရကျွန်တော်တို့ရဲ့မူရင်းဇာတ်ကောင်စုဆောင်း! အခုဆိုရင်သင်ကစားပွဲမှတဆင့်တိုးအဖြစ်အနိုင်ရနိုင်သည်ကိုကြည်ညိုဘွယ်ကောင်းသောစုဆောင်းဇာတ်ကောင်ကကိုယ်စားပြုထားတဲ့ 240 အဆင့်ထက်ပိုရှိပါတယ်။ တစ်ခုချင်းစီကိုဇာတ်ကောင်သင်ကစားပွဲအတွင်းမှာပါဝါ-ups သို့မဟုတ်နှစ်ဆအခွင့်အလမ်းကိုဝယ်ခြင်းငှါခွင့်ပြုပါလိမ့်မယ်ရွှေအရက်ဆိုင်ဆောင်ခဲ့ဦးမည်။
တစ်ဦးကအသေးအဖွဲကျွမ်းကျင်သူဖွေစျလာကျွန်တော်တို့ရဲ့6အမျိုးအစားထဲမှာ ** အဖြေမေးခွန်းများကို: အနုပညာ, သိပ္ပံ, သမိုင်း, ဖျော်ဖြေမှု, အားကစားနှင့်ပထဝီ, သင်ဘယ်လောက်စမတ်ပြသ!
အသေးအဖွဲကျွမ်းကျင်သူများအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ကို Join ** သင့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်တွင် TEAM CREATE, ဒါမှမဟုတ်သင့်ကိုယ်ပိုင်ဖန်တီးနှင့်အဆင့်ကိုတက်။ စောင့်ဆိုင်းဆုအများကြီး!
အပြည့်အဝပြန်လည်ပြုပြင်မွမ်းမံ graphics ** ယခင်ကထက်ပြတ်သားသောအရောင်အဆင်းနှင့်အတူကျွန်ုပ်တို့၏လှပသော Animation နဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာပျော်ရွှင်ခံစားပါ!
- သင့်မိတ်ဆွေများနှင့်မိသားစုနှင့်အတူ Play
- အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ကို Join သို့မဟုတ်သင့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ဖန်တီး
အသေးအဖွဲ Cracked2ပါဝင်သည်
- ကျော်ဘာသာစကား 20
- နယူး duels
- သင့်ကိုယ်ပိုင်အဖွဲ့သည် Create
- ပျော်စရာ, လုံးဝအခမဲ့၏ထိုအဝန်!
မင်းဘာစောင့်နေတာလဲ? ယခုဂိမ်းကို Download လုပ်များနှင့်မြို့ထဲတွင်ထူးချွန်ဆုံးဖြစ်လာ!
ပိုမိုသိရှိလိုပါက, https://www.triviacrack2.com သွားရောက်ကြည့်ရှု
မေးခွန်းများကိုရှိပါသလား? support.etermax.com မှာအကူအညီကိုရှာရန်
- YouTube ကို: https://www.youtube.com/c/triviacrack
Trivia Crack2အတြက္ အသံုးျပဳသူ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား
Trivia Crack2အေပၚ ျပန္လည္စစ္ေဆးမႈမ်ား
Trivia Crack2အေပၚတြင္ ျပန္လည္ စစ္ေဆးမႈ မရွိပါ။ ပထမဆံုး ျပဳလုပ္လိုက္ပါ!
Trivia Crack2အား အခ်က္ျပပါ
jaaproductions စတိုး 61 32.04k
Trivia Crack2ႏွင့္ အလားတူေသာ အက္ပ္မ်ားကို ေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ
APK အေၾကာင္း Trivia Crack2အခ်က္အလက္
APK ဗားရွင္း 1.25.0
ကိုယ်ရေးလုံခြုံမှု မူဝါဒ http://etermax.com/privacy/
App Name: Trivia Crack 2
Release date: 2019-06-14 16:25:36
လက်မှတ် SHA1: 13:A3:A4:55:F0:C1:26:26:42:2C:52:C4:54:4C:DC:B5:A2:27:52:25
အဖွဲ့အစည်း (O): Etermax
Trivia Crack2APK ကိုေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ